Ciidamada Kenya oo baaritaano ka wadda degmada Mandheera iyo deegaano ku dhow dhow – STAR FM SOMALIA
Kadib markii saraakiisha ciidamada booliska Kenya maalmo ka hor ay soo saareen digniino amaan, ayaa ciidamadda dowladda Kenya waxay maanta baaritaano ka wadaan degmada Mandheera iyo deegaanada ku xeeran.
Saraakiil u hadashay ciidamada Kenya ayaa sheegay in baaritaanadaasi lagu baadi goobayo xubno Alshabaab ka tirsan kuwaasi oo marar badan weeraro dhabo gal ah u geystay ciidamada Kenya.
Taliya ciidamada booliska Degmada Mandheera, ayaa sheegay in Al-shabaab marar badan weeraro ka geysteen deegaanada dhaca dhanka xuduuda, ciidamadoodana baadi goob ugu jiraan Alshabaab.
Ciidamada Kenya ayuu sheegay taliyaha iney qabteen rag lala xiriirinayo iney Al-shabaab gacan saar la leeyihiin, kuwaasi oo ku dhuumaaleysanayay deegaanada Mandheera ku teedsan.
Taliyaha ciidanka Mandera ayaa sheegay in ay laba jibaari doonaan howlgalada ay ka wadaan degmada Mandheera iyo sidoo kale degaanada hoos yimaada .
Saraakiisha dhanka amniga dalka Kenya ayaa sheegay in ay jiraan weeraro kusoo wajahan dalka kenya, sidaas darteedna dowladda looga baahan yahay in ay laba jibaarto xaqiijinta amniga.